Kuthetha ukuthini ukuphupha impukane? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Kubantu abaninzi, ukuphupha impukane kunokubangela inkanuko yokugabha nayo yonke loo nto. Iphupha likulethela umendo oya kuthi uzaliswe ziinguqu ezintle, oko kukuthi, ungoyiki kwakhona. Eyona nto intle kuwe kukuqonda ukuba olu tshintsho luyimfuneko kwindalo ekhoyo.
Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba ukuze uqonde ukuba liphupha lithetha ntoni, kuya kufuneka uzame ukukhumbula zonke iinkcukacha. Umxholo kufuneka uthathelwe ingqalelo, kuba uya kuphelela ekubeni yinto elungileyo ngakumbi kuwe. Akusoloko iphupha elizothe liza kuhlala linentsingiselo enyanyekayo.
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha ubhabha
2 Iphupha Nge-Whitefly
3 Iphupha lempukane emnyama
4 Iphupha lempukane ebhabha
5 Ukuphupha impukane ekutyeni
6 Ukuphupha impukane enkunkumeni
7 Ukuphupha impukane ephuma emlonyeni wakho
8 Iphupha lempukane efileyo
9 Ukuphupha iimpukane emzimbeni
10 Iphupha leempukane ezininzi
11 Iphupha lokubulala iimpukane
12 Ukuphupha impukane sisilumkiso?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ubhabha
Intsingiselo yeli phupha inxulumene nokuzingisa, oko kukuthi, kubaluleke kakhulu ukuhlala usiya phambili. Kubaluleke kakhulu ukukhankanya ukuba ukucinga ngexesha elidlulileyo okanye ukukhumbula iimvakalelo akunakuze kube yinto elungileyo. Yonke into iyavakala, kuya kufuneka ujonge okwangoku kwaye wakhe ikamva.
Kufanelekile ukucaphula ukuba ukuphupha impukane kubonisa ukuba ukwindlela elungileyo kwaye kulungile kakhulu. Ingabonakala ingeyonyani kuba iphupha lizisa imvakalelo ebangela intiyo encinci kwaye iyingozi. Kulungile ukuba isicatshulwa sikuncede uqonde le mibuzo kwaye izihloko ezilandelayo ziya kukunceda kuyo yonke le nto.
Ukuchuma kuza ebomini bakho kwaye konke kungenxa yendlela obujonga ngayo ebomini bakho. Eli iya kuba lixesha elifanelekileyo lokuvavanya ulwazi lwakho kwaye lusebenze lusebenze, kuba luya kusebenza ngakumbi.
Iphupha a impukane emnyama
Ingxaki ephambi kwakho ayisombululeki ngendlela eyiyo, kodwa oku kuya kutshintsha. Lixesha lokuba utshintshe indlela yakho, kuba iyakuba yinto entle kwaye kufanelekile. Khumbula ukuba yonke imeko ihlala ikulethela imfundo elungileyo.
Iphupha a bhabha obhabha
Awusenathemba ebomini, ke uyeke ukunika amanqaku kwaye ungenzi konke onako ukukwenza. Lixesha lokuba ufunde okungakumbi malunga nokuzingisa kwaye ke ufezekise iinjongo zakho. Ixesha elingaphezulu, uyakubona ukuba le meko iphela ikulethele izibonelelo ezithile.
Iphupha a bhabha ngokutya
Umntu osondele kakhulu kuwe ubuxoki, kodwa akukho sizathu sokufuna ukwazi ukuba ungubani kwaye ungalwi. Kuya kufuneka uqonde ukuba umntu ngamnye unokukunika kuphela oko anako, ke ngumbono ochanekileyo lowo. Lowo iya kuba ngumbuzo oya kuhlolisiswa ngumntu wonke kwaye uya kuzisa izibonelelo kuye wonke umntu.
Iphupha a bhabha emgqomeni
Uzigcinile iimvakalelo zakho kwaye ayizukuba yinto elungileyo ngobomi bakho, kuba akukho jelo lakubhengeza. Kuya kufuneka uqonde kangangoko ukuba into oyibekayo izakuba ngcono. Zama nje ukuveza izimvo zakho kwaye ngekhe ubenzakalise abantu abakungqongileyo.
Iphupha a Bhabha ephuma emlonyeni wakho
Amagama akhe khange asetyenziswe ngendlela eyiyo, ke kufuneka sitshintshe ukugxila kwakhe. Esinye sezona ndlela zintle onokuba nazo kukucinga kuqala kwaye emva koko uqalise ukuthetha into oyifunayo. Kodwa ngelishwa abanye abantu abayikhathaleli loo nto kwaye balahleka ngamagama.
Iphupha a Impukane efileyo
Isiqalo esitsha siphambi kwakho kwaye lifikile ixesha lokuba unike ilizwi kulo mba ubaluleke kangaka. Ukuphupha ngempukane efileyo kubonisa ukuba eli lixesha lokuba uzalwe ngokutsha, uguquke kwaye umshiye ngasemva loo mntu, kuba iya kuba yinto elunge ngakumbi kuwo wonke umntu.
Phupha nge Iimpukane emzimbeni
Abanye abantu abakungqongileyo beba amandla akho kwaye bakwenze ukuba uwamkele amandla. Eli lixesha lokutshintsha izimvo zakho kwaye ngakumbi ukuba nezimo zengqondo ezahlukeneyo. Musa ukuxelela abanye ngeengxaki zakho, kuba kukho ithuba lokuba baya kuyisebenzisa ngokuchasene nawe.
Phupha nge iimpukane ezininzi
Musa ukuba ngumntu owamkela kwaye azame ukuvela kangangoko, ukukhula kwaye ke ubone ukuba yonke into ekujikelezile iyaphucuka. Khumbula ukuba xa utshintsha icala lakho elingaphakathi, icala elingaphandle nalo liphucula ngokuzenzekelayo. Ngale ndlela, iimpukane ezininzi ziya kumela utshintsho ekufuneka lube lolungcono.
Phupha nge bulala iimpukane
Uyazibhuqa kwaye awuvumeli izinto ukuba ziqale ukuphucula, isizathu kukoyika kuphela. Abo baziva ukuba le nto ayinakukhula, kuba imvakalelo yokungazithembi inokwenzakalisa kakhulu. Kubalulekile ukuba uyiqonde le micimbi kwaye ke ubone ukuba iinjongo zinokufezekiswa. Into elungileyo ukuyenza yile, oko kukuthi, ungoyiki ukuthatha umngcipheko.
Ukuphupha impukane sisilumkiso?
Ewe, ukuphupha impukane kuthetha ukuba kuya kufuneka uphucule, kodwa kufuneka uyenze ngokukhawuleza nangaphezulu kwako konke kwangoko. Lungiselela le mingeni, sukukhalaza ubone ukuba konke oku bekuyimfuneko ekukhuleni kwakho. Okokugqibela, yiba nomonde, kuba utshintsho yinto eqhubekayo kwaye ayikhawulezi kangako.